Maxaa lagu qiimeyn karaa Khudbaddii Madaxweynaha Puntland ee Baarlamaanka hortiisa? | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Dowladda Soomaaliyeed ee Puntland Dr Cabdiweli Cali Gaas ayaa maanta khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey furitaankii kalfadhigii 35-aad ee Golaha Wakiilada Puntland.
Khudbadda oo ka koobneyd shan bog ayaa Madaxweynhu diirada saarey keliya muddadii ay kala maqnaayeen Xildhibaanada ee lixdii bilood ee u danbeysey.
Waxay ahayd khudbad la dhihi karo miiddaa ka da’ysa, oo miro magool ayey ahayd, waxay isugu jirtey qirasho wax-qabad, rajo-gelin mustaqbal iyo digasho siyaasadeed oo ah waxa lagu qiimeyn karo khudbadaha Madaxweynayaasha.
Waxaan ka soo qaadan karnaa khudbadda Madaxweynaha:
Amniga oo si weyn wax looga qabtey, amniga Puntland guud ahaan uu yaha mid la isku halen karo, dib u habenyta ciidan lagu faani karo oo tirsan, dhisidda keydka hubka oo aan horey u jirin, dhismayasha saldhigyo ciidan, ka hortaga argagixisada, dabar-goynta Tahribayaasha iyo kuwa ka ganacsada, dhismaha ciidanka Birmadka, tababarada ciidamada, iyo ugu danbeyn in Puntland leedahay maanta ciidamo ay ku faani karto iskuna haleyn karto.
Madaxweynaha Puntland wuxuu sheegay in ay dhaxleen culeys dhaqaale, iyo mid dalka si guud ula soo dersey, Waxaan ku guuleysaney baahinta dakhliga canshuuraadka oo ah in la gaarsiiyo gobolada iyo degmooyinka aan horey canshuur looga qaadi jirin, waxaa xafiisyo laga furey Sanaag, Heylaan iyo Gardafuul waxaana ka soo xeroota canshuur heer degmo ilamaa iyo Dowlad Dhexe ah ayuu yiri Madaxweynuhu.
Dr Cabdiweli ayaa sheegey in ay wadaan suuq loo iibgeyo badeecadaha Puntland haddana ay ku guuleysteen kastamka Tuurdibi oo u dhexeeya Itoobiya iyo Puntland, Somaliya, waa fursad ganacsateedenu suuq cusub ku helayaan ayuu yiri Dr Gaas.
Madaxweynaha Puntland ayaa hoosta ka xariiqey in mashaariicda Bangigaga Aduunku la wadaan Puntland meel fiican marayaan kuwaas oo loogu yeero Capacity Injection, PFM and Recurrent Costs RCRF, dhawaana ay bilaaban doonaan marka waxyaabaha la doonaayo la dhamaystiro.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegey in dhismayaasha kaabayaasha dhaqaalaha ay tahay hawlbolwaha horumarka sidaas darteedna ay xoogga saareen mudada u dhexeysa 2015 -2016 ay noqonayaan labada sano ee la soo afjaro dib u habeynta kaabayaasha dhaqaalaha, Waxaa bartanka maraya Garoonka diyaaradaha ee Bosaso, Waxaa dhawaan bilamaya ballarinta dekadda Bosaso, waxaa bilaaban doona Garoonka diyaaradaha ee Garoowe, Waxaa dayactir ku socdaa waddo 2016km ah oo u dhexeysa Garoowe iyo Gaalkacyo, waxaa la dhisaaa Wadada Garacad – Gaalkacyo tan Galdogob- Gaalkacyo, Waxaa la dhagax dhigey Ceel-daahir-Ceerigaabo oo dhan 220km, Waxaa qiimeyn lagu wadaa waddada Lafagoroyo ee Gardafuul. Magaalooyin badan waxay ku nalooyaan waddoyin badan oo Laami ah oo loo sameeyey.
Dib u habeynta shaqaalaha
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegeey in dib u habeyn lagu sameeyey shaqaalaha Dowladda wejigii kowaadna soo dhamaadey, la tira koobey oo la yaqaano inkasta oo wejiga labaad dhiman yahay.
Wuxuu sheegey in nidaamka shaqaaaleysiinta la sameeyey ayna noqoneyso tartan, sidoo kale la sameeyey nidaamka qandaraasyada.
Shaqaalaha ajnabeiga ah waxaa mudnaanta ka leh kuwa Puntland, inta la helaayo qof Soomaali ah oo Puntland ku sugan oo shaqada qaban kara in aan ajnebi la keeni karin dalka, ayaan go’aaminey ayuu yiri Dr. Gaas.
Madaxweynuhu waxa uu fariin toos ah u direy Dowladda Federaalka isaga oo u sheegey haka weecina shukaanta gaariga halkii loogu talo galey, haddii aad weecaataan, anaguna waan tashan waxkasta oo lagu heshiiyeyna waa lagu noqon, ma ahan federaalku in u maamulo jira dhibaato u hor seedo.
Rajada iyo Yidi-dialada
Dhanka rajada khudbadda Madaxweynuhu xanbaarsaneyd ayaa ahayd, ka faa’ideysiga iyo hormarinta Kalluumeysiga iyo kheyraadka badda oo Ilaah ku manaystey Puntland Somaaliya, Beeraha iyo waraabka, dib u habeynta caddaaladda, kor u qaadida adeega bulshada, hormarinta caafimaadka iyo waxbarashada.
Waxkasta dhaliil kama marna inkasta oo khudbadda sida aan kor ku sheegey ay ahayd mid aad u macaan, waxaa ka maqnaa qodobo muhim ah, sida Xuquuqda Shaqaalaha oo qaarkood dhibaato sheeganayaan waxa laga qabtey khudbadda kama muuqato, dib u dhaca ku yimid sameynta Guddiga Doorashooyinka oo iyagu dejin lahaa nidaamka Xisbiyada badan khudbadda waa ka maqneyd.
Isku soo xoori waxaan dhihi karaa khudbadda Madaxweynaha Puntland waxay ahayd mid yidi-diilo leh, biyo baraf ahna ku shubtey kuwa dadka cabsida-geliya.